Mr. Kugadzirira: Zvivakire Yako Pachivande Pekugara paLinux | Linux Vakapindwa muropa
Mr. Kugadzirira mutambo wevhidhiyo maunogona kutamba kuti uvake yako yepasi pekugara izvo zvinogona kuuya kuLinux, kuti iwe ugone kuzvinakidzwa pane yako yaunofarira GNU / Linux distro. Uye zvese nekuti iwe uchazviisa iwe mune shangu dzemumwe munhu ari kupokana nehurumende uye ndosaka iwe uchafanirwa kuvaka iyi antinuclear pekugara uye kudzivirira hurumende kubva mukuzadzisa hurongwa hwayo hwekuita vese avo vagari vasingaiteerere vanonyangarika.
Iwo mavara haana kunaka, nyaya yacho haisi yeimwe yeakanakisa atakaona mumitambo yemavhidhiyo, asi ini ndinofunga chinoiisa parutivi kubva kune zvimwe ndizvo zvavanoita. inokwezva kune vakawanda vatambi. Kuomarara hakusi kungofanana nekubudirira, takazviona munguva pfupi yadarika nemazita akadai seMinecraft, uko mutambo wakapusa, uine yakaipa kwazvo uye pikisheni mifananidzo, yanga iri boom. Mr. Mr. Prepper acharova here? Ini handizive, isu tichafanirwa kumirira ...
Pave nechinguva kubvira apo mugadziri waVaPepper akati afunge nezvekugadzira chiteshi chinoshanda paLinux yemusoro wenyaya uyo unoshanda. Idzo inhau huru kune vashandisi veLinux, tinoona kuti zuva rega rega kune matsva mazita ekuwedzera kune yatove yakanyanya kuwanda runyorwa rwemavhidhiyo mitambo yeLinux, apo makore mashoma apfuura mazita acho aionekwa nekusavapo kwavo. Kana iwe uchida kutsigira danho rekuita kuti riwanikwe paLinux, unogona access here uye ita kuti vazive kuitira kuti pakupedzisira zvive zvechokwadi.
Uye kana ikazosvika Linux, muna Mr. Prepper iwe unowana zvinotevera features Ndiri kuzokuudza uye uchavaona muQ4 yegore ra2018, saka hazvingatore mwedzi yakawandisa. Pamusoro peiyo huru mishoni, zvivakire yako yepasi pekugara pasi peimba yako, unogona zvakare kugadzira michina yemagetsi kuti urambe uri mupenyu, kuvaka dzimba dzekuchengetera chikafu iwe, maturusi, mota, nezvimwe. Iwe unozogona kutaurirana nevavakidzani kuchinjanisa, kuronga uye kunzvenga mapurisa epachivande.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Mr. Kugadzirira: Vaka Yako Yega Pasi Pevhu Pekugara paLinux
Kwete yepakutanga…. inotaridzika zvakanyanya kunge Fallout Shelter, asi zvingave zvakanaka. Tichafanirwa kumutevera kwazvo.
Slax 9.5, vhezheni itsva yeimwe yakareruka kupihwa kweGnu / Linux